HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Chichewa Chitonga (Malawi) Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galoà Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Oromo Poloney Portogey Romanianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Télougou Valencienne Wallis Xhosa Zoloa tzeltal
“Mankanesa any amin’ny fandraisam-peo any Columbia, any New York, fa hampanaovina ny iray amin’ny hirantsika ianao. Horaisina feo any ilay izy. Aza lazaina amin’iza na iza ny anton-dianao any.”
Vitan’i William Mockridge tamin’ny faramparan’ny 1913 io fanendrena hafakely avy amin’i Charles Russell io. * Natao tamin’ny diska 78 tours ilay hira ary “Ilay Hoavy Mahafinaritra” (“The Sweet By-and-By”) no ahafantaran’ny olona sasany azy. Tatỳ aoriana vao fantatr’i William hoe hampiasaina eo am-piandohan’ny “Fampisehoana An-tsary ny Famoronana” (anglisy) ilay hira. Lahateny ara-baiboly noraisim-peo izy io, ary misy mozika ampiarahina amin’ny sarimihetsika tsy misy feo sy sary natao tamin’ny takelaka fitaratra. Tany New York no nalefa voalohany io fampisehoana io, tamin’ny Janoary 1914.
Zavatra noraisim-peo 50 mahery no nalefan’ireo mpikirakira grafofaonina rehefa nandefa ny “Fampisehoana An-tsary” tamin’ny teny anglisy izy ireo, anisan’izany ilay hira nataon’i William. Hiran’olona ny ankamaroan’ireo nampiasaina. Ny Mpianatra ny Baiboly kosa no nanao ny hira sasany, toy ilay nataon’i William. Nampiasa teny avy ao amin’ny Hiran’ny Fiandohan’ny Arivo Taona, iray amin’ny fihiranany, izy ireo.
Nojerena akaiky ny tononkira
Hiram-pivavahana nosoratan’olon-kafa no nampiasain’ny Vavolombelona nandritra ny taona maro. Novan’izy ireo anefa ny tonony, indraindray, arakaraka ny fahatakarany ny hevitry ny Soratra Masina.
Nalefa tamin’ilay “Fampisehoana An-tsary”, ohatra, ny hira iray mitondra ny lohateny hoe “Mivoaka Hiady ny Mpanjakantsika”, izay nalaina avy amin’ilay hira hoe “Hiran’adin’ny Repoblika” (Battle Hymn of the Republic). Izao no fiandohan’ilay “Hiran’ady”: “Hitan’ny masoko ny voninahitry ny fiavian’ny Tompo.” Novan’ny Mpianatra ny Baiboly anefa ny tonony ka lasa hoe: “Hitan’ny masoko ny voninahitry ny fanatrehan’ny Tompo.” Hita avy amin’izany fa nino izy ireo hoe tsy ny fiavian’i Jesosy Kristy fotsiny no tafiditra amin’ny fitondrany, fa ny fanatrehany mandritra ny fotoana voafaritra koa.—Matio 24:3.
Rehefa navoaka ny “Mihira sy Mikalo ao Am-ponareo”, tamin’ny 1966, dia nezahina mba tsy hampiasaina intsony ny hira fantatra hoe avy amin’izao tontolo izao na avy amin’ny fivavahana hafa. Nanangana orkesitra kely ny Vavolombelona tamin’io taona io ary noraisim-peo tsirairay ireo hira 119 tao amin’io boky io. Ireny raki-peo ireny no nampiasaina nandritra ny fivorian’ny fiangonana, mba harahina rehefa mihira. Tian’ny Vavolombelona sasany koa ny nihaino azy ireny tany an-tranony.
Namoaka fihirana vaovao hoe Mihirà ho An’i Jehovah ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny 2009. Efa noraisim-peo amin’ny fiteny maro ny raki-kiran’izy io. Namoaka video misy hira ho an’ny ankizy ny Vavolombelona, nanomboka tamin’ny 2013, anisan’izany ilay hoe Mivavaha Foana. An-tapitrisany maro ny fandikana hira ataon’ny olona miditra ao amin’ny jw.org, isam-bolana.
Maro no mankasitraka an’ireo hira ireo. Hoy ny vehivavy iray atao hoe Julie momba an’ilay fihirana hoe Mihirà ho An’i Jehovah: “Tsara be ireo hira vaovao! Rehefa irery aho, dia mitendry ny hira tena mahalaza ny fihetseham-poko. Hitako hoe manamafy ny fifandraisako amin’i Jehovah izany, dia lasa tapa-kevitra kokoa hanome azy ny zava-drehetra ananako aho.”
Manan-janaka mianadahy, fito taona sy sivy taona, i Heather. Nisy vokany teo amin’ireo zanany ireo ilay video hoe Mivavaha Foana. Hoy i Heather: “Lasa mivavaka foana izy dahy, tsy hoe vao maraina fotsiny, na rehefa miaraka aminay fotsiny, fa isaky ny te hiresaka amin’i Jehovah.”
^ feh. 3 I Charles Russell (1852–1916) no nitarika ny Mpianatra ny Baiboly (Vavolombelon’i Jehovah ankehitriny).
Ahoana no niandohan’ny tena Kristianina? Ary ny Vavolombelon’i Jehovah? Boky sy sary ary vakoka an-jatony no ho hitanao ato amin’ity fampirantiana ity.